२०७४ असोज ११ गते बुधवार
२०७४ असोज ११ गते बुधवारको प्रतीक दैनिक
वीरगंजको गणना शुरु, कलैयाको मतगणना अन्योलमा
प्रस, वीरगंज, १० असोज/ प्रदेश नं. २ को बाँकी रहेको बारा जिल्लाको कलैया उपमहानगरपालिका मतगणना हिजो रातिदेखि स्थगित छ भने पर्साको वीरगंज महानगरपालिकाको मतगणना आज दिउँसो डेढ बजेदेखि सुचारु भएको छ । कलैया उपमहानगरपालिकाको वडा नं. २० बसतपुरका वडाध्यक्ष, सदस्यहरूले बदर मत सङ्ख्या बढेपछि र मतपत्रमा दुईथरीको स्वस्तिक चिह्न प्रयोग भएको भेटेपछि मतगणना स्थगित गरी पुनः मतदानको लागि माग गरेको कारण हिजो रातिदेखि मतगणना स्थगित भएको हो । वडा नं. २० मा २२५० मतदान भएको छ, जसमा १२५ मत हिजो बदर भएको थियो । मत बदर सङ्ख्या बढन सक्ने कारण दोहोरो स्वस्तिक चिह्नको प्रयोग भएको पाइएपछि प्रतिनिधिहरूले गणना स्थगन गरी पुनः मतदानको माग गरेका हुन् । २७ वडा रहेको कलैया उपमहानगरपालिकामा २६ वडाको गणना भइसकेको छ । गणना सुचारु गर्नको लागि आज बिहानदेखि गरिएको प्रयास दिउँसोसम्म सहमति जुटन नसकेको बताइएको छ । वीरगंजमा भने अस्ति बेलुकीदेखि नगर प्रमुख र उपप्रमुखको पुनः मतगणनाको माग गर्दै आएका दलहरूले आज दिउँसो डेढ बजेदेखि सहमति जनाएपछि रोकिएको वडा नं. १६, १७, १८ को मतगणना शुरु भएको छ । नेकाका उम्मेदवार अजय द्व
भोजपुरी भाषालाई कामकाजी बनाउन नवनिर्वाचित मेयरको निर्देशन
प्रस पथलैया, १० असोज/ जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका नवनिर्वाचित मेयर डा. कृष्ण पौडेलले भोजपुरी भाषालाई पनि कार्यालयको कामकाजी भाषा बनाउन निर्देशन दिएका छन् । स्थानीय तह निर्वाचनमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूका लागि मङ्गलवार आयोजित शपथ ग्रहण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मेयर पौडेलले भोजपुरी भाषालाई कार्यालयको कामकाजको भाषा बनाउन निर्देशन दिएका हुन् । उपमहागरभित्र भोजपुरी मातृभाषा भएका समुदायको बसोबास रहेको र उपमहानगरलाई सबैको साझा बनाउन भोजपुरी भाषालाई कामकाजमा ल्याउन उनको आग्रह थियो । पौडेलले सम्बोधनका क्रममा उपमहानगरलाई मेगा सिटी र समृद्ध महानगर बनाउने आधार खडा गर्ने अभियान अब शुरु भएको बताए । दक्षिण एसियाकै प्रमुख केन्द्रको रूपमा स्थापित हुने सम्भावना बोकेको उपमहानगरलाई अब मेगा सिटी बनाउने र समृद्ध महानगरको आधार आफ्नै नेतृत्वमा खडा गर्ने उनले बताए । पौडेलले समृद्धिको अभियान अन्तर्गत ६ महिनासम्म विज्ञ टोली झिकाएर काम शुरु गर्ने बताए । “अबको ६ महिनासम्म विज्ञ टोली झिकाएर गुरुयोजना बनाउने छौं । त्यसपछि उपमहानगरको छिटोभन्दा छिटो कसरी व्यवस्थित विकास गर्न सकिन्छ भन्ने अभिय
वीरगंजको मेयरले विजयादशमीभन्दा पहिले टीका लगाउने
प्रस, परवानीपुर, १० असोज/ प्रदेश नं २ को एक मात्र महानगर वीरगंजको मतगणना लगलग अन्तिम चरणमा पुगेको छ । तीन दिनभित्र मतगणना सकिने आकलन गरिएको छ । १ लाख ८ हजार ५ सय १ कुल मतदाता रहेको ३२ वडाको वीरगंजमा महानगरमा ८४ हजार ३ सय १२ मत खसेको थियो । ३ गते दिउँसो २ बजेदेखि शुरु भएको मतगणना १० गते मङ्गलवार रातिसम्म करिब ७३ हजार मत गनिसकिएको छ । ११ हजार मत मात्र गन्न बाँकी छ । वडा नं १४, पिपरा लक्ष्मनवाको मतगणना केही घण्टामैं सकिने मुख्य निर्वाचन अधिकृत विष्णु सुवेदीले जानकारी दिए । उनले दैनिक ६ हजारकै हिसाबले गणना गरियो भने दुई दिनमा गणना सकिने बताए । अहिले दुई दिनदेखि मतपेटिका नखुलेको वडाको मतगणना शुरु भएको छ । निर्वाचन अयोगको पत्र र निर्देशनमा १६,१७,१८ को मतगणना शुरु भएको हो । काङ्ग्रेसले १६, १७ र १८ वडाबाहेक मतगणना भएको सबै वडामा मेयर र उपमेयरको पुनः मतगणना गर्नुपर्ने माग राख्दै जिल्ला निर्वाचन कार्यालय पर्सामार्फत निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको थियो । मतगणनामा धाँधली र कलमको ठाउँमा सिसाकलम प्रयोग गरिएको तथा मुचुल्का भन्दा बढी मतपत्र केही वडामा फेला परेपछि निर्
‘दशैंकप’मा वनशक्ति ‘ए’ र ‘बी’ विजयी
प्रस, ठोरी, १० असोज/ ठोरीमा जारी ‘दशैंकप’ पूmटबल प्रतियोगिताको मङ्गलवारको दुवै खेल आयोजक वनशक्ति युवा क्लब ‘ए’ र ‘बी’ ले जितेका छन् । ठोरी गाउँपालिका–२ स्थित ब्यारेक खेलमैदानमा जारी पहिलो खेलमा आयोजक वनशक्ति युवा क्लब ‘ए’ ले युवा हरियाली क्लब ‘बी’ टीमलाई ७–० को फराकिलो गोल अन्तरले पराजित गरेको हो । मङ्गलवार नै भएको दोस्रो खेलमा आयोजक वनशक्ति युृवा क्लब ‘बी’ले निर्मल समाज क्लब ठोरी गाउँपालिका–१ लाई टाइब्रेकरमा पराजित गरेको छ । निर्धारित समयमा दुवै टीमबाट १/१ गोलको बराबरी भएपछि खेलको निर्णय टाइब्रेकरबाट लिइएको थियो । टाइब्रेकरमा वनशक्तिले निर्मल समाजलाई ३–२ गोल अन्तरले पराजित गरेको आयोजकका धीरसिंह घिमिरेले जानकारी दिए ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रभाव पारेका तत्वहरु
भरत सहनी प्रदेश नं. २ को मत परिणामसँगै देशको सबै ७५३ स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको पूर्ति भइसकेको छ । यस अघि सम्पन्न पहिलो तथा दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनको तुलनामा तेस्रो चरणको निर्वाचन शान्तिपूर्ण तथा भयरहित वातावरणमा सम्पन्न हुनुलाई सबैले खुलेरै प्रशंसा गरेका छन् । पहिलो तथा दोस्रो चरणको निर्वाचनमा भाग नलिएका राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) अन्तिम चरणको निर्वाचनमा भाग लिनाले यो सब सम्भव भएको हो । २० वर्षपछि भएको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित भई माओवादी केन्द्र, राजपा, सङ्घीय समाजवादी फोरम, फोरम लोकतान्त्रिक र नेपाली जनता दल लगायत पहिलोपटक स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधित्व गर्दैछन् । स्थानीयस्तरमा राम्रो पकड हुने दलले स्थानीय तहमा राम्रो नतिजा प्राप्त गर्ने र स्थानीय तहमा राम्रो नतिजा प्राप्त गर्ने दलले प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा राम्रो परिणाम हासिल गर्ने सम्भावना उच्च रहन्छ । तर हालै सम्पन्न तेस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्थानीय जनाधार नभएका कतिपय दलले समेत राम्रो नतिजा प्राप्त गर्न सफल भएका छन् । तर सधै यसरी नै निर्वाचन परिणाम दोहोरिन्छ भन्ने आश गर्नु व्यर्थ ह
विभिन्न किसिमको दुरवस्था झेलिरहेको नेपाली जनतालाई अहिले विभिन्नथरीको आशङ्काको रोगले च्याप्न थालेको छ । नेपाली जनतामा, लामो समयदेखि निरन्तर जारी सङ्क्रमणकालले कुनै पनि कामप्रति आशङ्का जन्मने स्वभाव बन्दै गइरहेको छ र परिस्थितिले पनि उक्त स्वभावको पोषणमा योगदान दिइरहेको छ । पर्सा जिल्लामा जारी स्थानीय तहको मतगणना कार्य, अन्यत्र सम्पन्न भइसकेर, महानगरपालिका मात्र बाँकी रहँदा, आजभोलि परिणाम आउने आशमा बसेको नगरवासीको मनमा तुषारापात भएको छ । निर्वाचन आयोगले जारी गरेको मत–तालिका र दलका मतगणना प्रतिनिधिहरूले दिएको तालिकामा भिन्नता रहेको अत्तो थापेर एकथरीले विवाद उठाएपछि भरतपुरजस्तै लामो समयसम्म वीरगंजको मतगणना पनि विलम्बित हुने हो कि भन्ने आशङ्का उब्जेको थियो । भरतपुरकाण्डको परिणामबाट त्रस्त नेपालीमा संत्रास उत्पन्न गराएको थियो । हुनत तत्कालका लागि मतगणना राखी राख्ने सद्यःनिर्णयले यो आशङ्का टरेको छ । कुनै व्यवधान उत्पन्न नहुने हो भने भोलि वा पर्सिसम्म वीरगंजको मतगणना सम्पन्न भएर परिणाम आइसक्छ । परिणामको अनुकूलता वा प्रतिकूलताले कोही हर्षित र कोही दुःखी बन्नु अनिवार्य छ । यो स्वाभाविक मा
२०७४ असोज १० गते मङ्गलवार
२०७४ असोज १० गते मङ्गलवारको प्रतीक दैनिक
पर्सामा कसले कति जित्यो ?
प्रस, वीरगंज, ९ असोज/ वीरगंज महानगरपालिकाको हालसम्मको घोषित परिणाम अनुसार निम्न दलका व्यक्तिहरू वडाध्यक्षमा विजयी भएका छन् । मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय वीरगंजले जनाए अनुसार नेकाले ६ वडामा विजय हासिल गरेको छ भने सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल ७ वडामा विजयी भएको छ । त्यस्तै एमाले ४ वडामा, राजपाले ३ वडामा विजय हासिल गरेको छ । यता पर्सा जिल्लामा एक महानगर, ३ नगर र १० गाउँपालिका गरी १४ पद रहेकोमा राजपा १ पद पनि जित्न सफल भएको छैन । नेका २ नगरपालिका, १ गाउँपालिका गरी ३ स्थानमा जितेको छ भने फोरम नेपाल १ नपा, २ गापा गरी ३ तहमा जितेको छ । एमाले २ गाउँपालिकामा विजयी भएको छ । यसैगरी नेपाली जनता दल १ नपा र १ गापामा गरी २ तहमा जितेको छ । माओवादी केन्द्र ३ गापामा विजयी भएको छ । उपमेयरमा फोरमको ६, माओवादी केन्द्रको २, एमालेको १, नेका ४ जना विजयी भएका छन् ।
मेयरका १५ जना प्रत्याशीले १ मत पनि पाएनन्
प्रस, वीरगंज, ९ असोज/ वीरगंज महानगरको मेयरका ३५ प्रत्याशीमध्ये १५ जनाले अहिलेसम्म १ मत पनि पाउन सकेका छैनन् । १ लाख ८ हजार ५ सय १ मतदाता रहेको वीरगंज महानगरमा असोज २ गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा ८४ हजार ७ सय ६३ मत खसेको थियो । अहिलेसम्म जारी मतगणनामा करिब २८ वडाको नतिजा सार्वजनिक भएको छ । केही वडाको मतगणना जारी छ भने १५ देखि १८ वडाको मतगणना केही राजनीतिक दलको विरोधमा हाल स्थगित अवस्थामा छ । पछिल्लो मतगणनासम्म मेयरका ३५ प्रत्याशीमध्ये १५ जना उम्मेदवारले आप्mनो मतसमेत पाउन सकेका छैनन् । जबकि निर्वाचन प्रयोजनमा उम्मेदवारी दर्ता गर्दा एकजना समर्थक र एकजना प्रस्तावकले उम्मेदवारको हकमा हस्ताक्षर गरेको हुन्छ । समर्थक, प्रस्तावक तथा उम्मेदवार समेतले आपैmलाई मतदान नगरेको सङ्ख्या १५ छ । वीरगंज महानगरमा उम्मेदवारी दिएका मेयरका प्रत्याशीमध्ये १ मत पनि नपाउनेहरूमा काउली, केटाकेटी, काठको मुढा, कालो पाटी, मसी र कलम, ज्यावल, काँटा–चम्चा, बिरालो, मकैको बोट, क्यालकुलेटर, ठेकी, बाकस, ब्याट्री, ब्याडमिन्टन कर्क, पानीको बोतल, पानीको फिल्टर, कोसा चुनाव चिह्न रहेका उम्मेदवारले १ मत पनि पाए
वीरगंजको मतगणना फेरि रोकियो
प्रस, परवानीपुर, ९ असोज/ प्रदेश नं दुईको एक मात्र महानगरपालिका वीरगंजको मतगणना फेरि रोकिएको छ । वडा नं १६ नगवा, १७ अलौ र १८ भवानीपुरको मतगाना शुरु गर्न माग राख्दै सङ्घीय फोरमलगायत अन्य केही पार्टीका राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले मतपेटिका खोली मतगणना शुरु गर्न माग राखेका छन्् । साँझ ७ बजेदेखि महानगर वीरगंजको मतगणनास्थल ठाकुरराम बुहुमुखी क्याम्पसको मूल गेटमा राजनीतिक दलका प्रतिनिध तथा नेता कार्यकर्ताहरूले नाराबाजी गर्दै मतगणना अवरुद्ध पारेका हुन् । मतगणनास्थलबाट राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू बाहिरिएपछि मतगणना रोकिएको हो । उनीहरूले यथाशीघ्र ती तीन वडाको मतगाण्ना शुरु गर्न माग गरेका छन् । यस विषयमा पर्साका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गादत्त पौडेलसँग कुरा गर्दा मतगणना जारी रहेको वडा नं १० घडिअर्वा, ११ श्रीपुर, १५ लक्ष्मणनवा र १९ विन्दवासिनीमा मतगणना सकिएपछि राजनीतिक दलको बैठक राखी तीन वडाको मतगणना गर्ने कार्यक्रम रहेको बताए ।
चिकित्सकद्वारा जिल्ला प्रशासनमा धर्ना
प्रस, वीरगंज, ९ असोज/ नेपाल चिकित्सक सङ्घले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग भएको पटक–पटकको वार्ता बिना निष्कर्ष टुङ्गिएपछि आज जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्सा घेराउ गरेको छ । नेपाल चिकित्सक सङ्घ, पर्साको आयोजनामा शुक्रवारदेखि पर्सा जिल्लाका चिकित्सकहरूले एप्रोन लगाएर हातमा कालोपट्टीसहित आन्दोलन गर्दै आएका थिए । तर राज्यले मागप्रति बेवास्ता गरेको भन्दै अब चरणबद्ध आन्दोलन शुरु गरेको डा. मनोज गुप्ताले बताए । नेपाल सरकारले हालै जारी गर्न लागेको स्वास्थ्य नीति अन्तर्गत मृतकको क्षतिपूर्ति चिकित्सकले बेहार्नुपर्ने, ५ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्कलगायत ३ बुँदे माग राखेर चिकित्सकहरूले आन्दोलन गर्दै आएको गुप्ताले बताए । चिकित्सकहरूको आन्दोलनको कारण पर्सा जिल्लामा अहिले उपचार नपाएर बिरामीहरू भौतारिरहेका देखिन्छन् । अस्पतालमा इमर्जेन्सी सेवाबाहेक सम्पूर्ण ओपिडी सेवा ठप्प भएको कारण बिरामीहरू मर्कामा परेका छन् । तराईमा बढदो गर्मीसँगै रोगीको चाप पनि बढेको छ ।
स्टार स्पोर्ट्स माडीको विजयी शुरुआत
प्रस, ठोरी, ९ असोज/ ठोरी गाउँपालिका–२ को वनशक्ति स्थित ब्यारेक खेलमैदानमा सोमवारदेखि शुरु ‘दशैं कप’ पूmटबल प्रतियोगिताको उद्घाटन खेल जित्दै स्टार स्पोटर््स क्लब माडी चितवनले विजयी शुरुआत गरेको छ । वनशक्ति युवा क्लबले वडा दशैंको अवसरमा ठोरी गाउँपालिका–२ स्थित ब्यारेक खेलमैदानमा शुरु भएको प्रतियोगितामा चितवनको स्टार स्पोटर््स क्लब माडीले १–० गोल अन्तरले युवा हरियाली क्लब ठोरी–२ लाई पराजित गरेको हो । दोस्रो हाफको अन्तिम मिनेटमा स्टार स्पोटर््स माडीका लागि मिलन दुराले गरेको एक मात्र गोल निर्णायक बन्यो । हारसँगै युवा हरियाली क्लब ‘ए’ प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ । प्रतियोगिताको उद्घाटन समाजसेवी गीतादेवी बिष्ट र ठोरी गाउँपालिका–२ का वडा अध्यक्ष किशोर तामाङले संयुक्त रूपमा रिबन काटेर गरेका थिए । चितवन र पर्साका गरी १३ वटा क्लबको सहभागिता रहेको प्रतियोगिताका विजेताले रु ५१ हजार नगद, ट्रफी र प्रमाणपत्र र उपविजेताले रु २५ हजार नगद, ट्रफी र प्रमाणपत्र हात पार्ने आयोजक विशाल क्षत्रीले बताए । प्रतियोगिताको फाइनल खेल असोज १९ गते हुने उनले बताए ।
अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव नयाँ संविधान लागू भएदेखि २ नं. प्रदेशलाई अशान्त, अस्थिर, अविकसित प्रान्तको रूपमा बुझिने गरिएको थियो । यहाँको चुनावमा जनसहभागिता कम हुने, बढी हिंसा हुने अनुमान गरिएको थियो । त्यसैले सबै क्षेत्रको चुनाव सम्पन्न भएपछि मुलुकभरिको सुरक्षा संयन्त्र परिचालन गरेर यहाँ चुनाव गरियो । तर वर्तमान चुनावमा लगभग ८० प्रतिशत मतदान भयो र कहीं पनि हिंसात्मक घटना भएन । यसबाट मधेसप्रति राष्ट्रको बुझाइ सच्याउन जरुरी छ । मधेसी समस्याकोे गाँठो पनि यही होे । मधेसीहरूको सङ्घर्ष समग्र मुलुक र मुलुकवासीको समानता, विकास, स्वायत्तता, समृद्धि, हरेक खालको विभेदको अन्त्य एवं संवैधानिक अधिकारको लागि हो भन्ने कुरा मधेसी जनताले बुझेको छ । तर राष्ट्रिय शक्तिहरूले यसलाई राष्टिय अखण्डता विरुद्ध सङ्घर्षको रूपमा बुझ्ने र बुझाउने गरेका छन्, जुन नितान्त गलत हो । बीस वर्ष अघि भएको चुनावमा जनतामा कित्ताकाट हुन्थ्यो । मतदान गर्दा हरेक पदमा रोजेको दललाई नै मत हाल्ने गरिन्थ्यो तर वर्तमान चुनावमा दलीय उमेदवारभन्दा रोजेको व्यक्तिलाई हालेको देखिन्छ । किनभने एउटै मतपत्रमा एक भन्दा बढी दललाई मत दि
चुनावले थिचेको समस्या
चुनावको नतिजा जान्ने कौतूहलले हिजोआजको सामान्य वा कहींकतै विशेष समस्यालाई पनि यति बिघ्न थिचिदिएको छ कि मानिसको स्वाभाविक ध्यान चुनावबाहेक अन्यत्र छैन । यद्यपि मानिसको प्राथमिक आवश्यकता नुन, तेल, लकडी हो र त्यसपछि स्वास्थ्य हो । मन्त्रिपरिषद्ले उपचारको क्रममा बिरामीको मृत्यु भयो भने क्षतिपूर्ति सम्बन्धित चिकित्सकसँग भराउने निर्णय गरेसँगै नेपालका चिकित्सकहरू शुरुमा विरोधमा उत्रे । मौखिक र विज्ञप्ति–विरोधबाट सरकार प्रभावमा नआएपछि चिकित्सकहरूले स्वास्थ्य सेवा नै ठप्प पारेका छन् । आजको मानिसलाई कि विपन्नताजन्य कि विलासिताजन्य रोगले थिलथिलो पारेको छ । यस अर्थमा दुवैथरी वर्ग विभिन्न रोगको शिकार भइरहेको छ । रोग लागेपछि उपचार हुनुपर्छ । उपचार गर्ने चिकित्सकहरू हडतालमा छन् तर पनि जनमानसमा कुनै प्रभाव परेको देखिएको छैन । कमसेकम चिकित्सकीय समस्याको चाँडो निदान होस् र स्वास्थ्यसेवा प्राप्त होस् भन्ने चाहनाले आम जनतालाई छुन पनि सकेको छैन । मूलमा चुनाव परिणामप्रतिको उत्सुकता नै हो । सरकारको उपरोक्त निर्णयप्रति विरोध जनाउँदै चिकित्सकहरूले गरेको सेवा निषेधले सरकार निर्णय फिर्ता लिने मनसाय देखाए
२०७४ असोज ९ गते सोमवारको प्रतीक दैनिक
वीरगंज महानगरमा फोरमको झिनो अग्रता कायमै
प्रस, वीरगंज, ८ असोज/ वीरगंज महानगरपालिकाको मतगणना जारी छ । असोज ३ गतेदेखि शुरु भएको मतगणना आजको मितिसम्म ५० हजार १ सय ४८ मात्र गनिएको छ । ८४ हजार ७ सय ६३ मतदाता रहेको वीरगंज महानगरको ३४ हजार मतगणना अभैm बाँकी छ । पछिल्लो चरणमा मतगणना तीव्र गतिमा भइरहेको छ । तर पनि दैनिक १० हजारभन्दा बढी गन्न सक्ने स्थिति छैन । यो हिसाबले अभैm तीन दिन लाग्ने देखिन्छ । वीरगंज महानगरपालिकाको पछिल्लो मत परिणाम अनुसार नेकाका अजय द्विवेदीले ११४७२ मत ल्याएका छन् भने फोरम नेपालका विजय सरावगीले ११६८२ मत ल्याएका छन् । यसैगरी राजपाका राजेशमान सिंहले ७६३० मत ल्याएका छन् भने एमालेका बसरूद्दीन ५७८६ र माओवादी केन्द्रका रहबर अन्सारीले ५१५६ मत पाएका छन् । यसैगरी नेपाल लोकतान्त्रिकका विमल श्रीवास्तवले ४६२१ मत पाएका छन् । मतगणनाको शुरुको दिनमा नेकालाई राजपाले पछाडि पारेको थियो भने हिजोदेखि फोरम नेपालले पछाडि पार्दै आएको छ । नेका र फोरम नेपालबीच झिनो मतको अन्तरमा प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । पहिलो चरणमा अग्रपङ्क्तिमा आएको राजपा आजसम्म तेस्रो नम्बरमा छ । उपमेयरमा नेकाकी शान्ति कार्कीले १३०५७, फोरम नेपालकी
पर्सा जिल्लामा कसले जित्यो ?
प्रस, वीरगंज, ८ असोज/ पर्सा जिल्लामा वीरगंज महानगरपालिकाबाहेक तीन नगरपालिका र १० गाउँपालिकाको मत परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ । यसै क्रममा नेकाले पर्सा गढी र बहुदरामाई गरी दुई नगरपालिका र धोबिनी गाउँपालिकामा ३ स्थानमा जित हासिल गरेको छ भने एमालेले जिरा भवानी र पटेर्वा सुगौली गाउँपालिकामा मात्र जीत हासिल गरेको छ । त्यसैगरी माओवादीले ठोरी, जगरनाथपुर, छिपहरमाई गाउँपालिकामा, फोरम नेपालले विन्दवासिनी, सखुवा परसौनी, पकाहा मैनपुर गाउँपालिका र नेपाली जनता दलले पोखरिया नगरपालिका र कालिकामाई गाउँपालिका गरी २ स्थानमा जीत हासिल गरेको छ । उपप्रमुखमा पनि नेकाले २ नपा, १ गापा गरी ३, एमालेले १ गापा गरी १, माओवादीले २ गापा गरी २, फोरमले १ नपा, ६ गापा गरी ७ स्थानमा जीत हासिल गरेको छ । पर्साको परिणाममा राजपाले नपा र गापामा कुनै पनि जीत हासिल गर्न सकेको छैन ।
जीतपुर सिमरा उपमनपाको मतगणना सम्पन्न, मेयर, उपमेयरसहित ६ वडामा एमाले, १२ मा माओवादी
प्रस, जीतपुर, ८ असोज/ जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाको मतगणना गएराति सम्पन्न भएको छ । मतगणना परिणाम अनुसार मेयरमा एमालेका उम्मेदवार डा. कृष्ण पौडेलले १४ हजार ८६५ मतले विजयी भएका छन् भने उनका प्रतिद्वन्द्वी नेकाका कृष्णवर्त सिंहले १२ हजार ४३ मतमा चित्त बुझाएका छन् । उपमेयरमा एमालेकी सरस्वती चौधरीले १४ हजार ४५९ मतले विजयी भएकी छिन् । उनको प्रतिद्वन्द्वी नेकाकी नारायणी रायमाझीले १२ हजार ४६५ मत पाएकी छन् । माओवादी केन्द्रका मेयर उम्मेदवार राजन पौडेलले ११ हजार २४८ र उपमेयरकी उम्मेदवार गायत्री थरुनीले १० हजार ८६६ मतमा चित्त बुझाएका छन् । २४ वडामा विभाजित जीतपुर सिमरा उपमनपाको मत परिणाम अनुसार १२ वडामा माओवादी केन्द्र, ६ वडामा राष्ट्रिय जनता पार्टीका उम्मेदवारहरु विजयी भएका छन् । जीतपुर सिमरा उपमनपाको सदरमुकाम वडा नं. ७ जीतपुरमा नेकाका उम्मेदवार रामबाबूप्रसाद गुप्ताले २५ मतको अन्तरमा ९९६ मत पाएर विजयी भएका छन् भने उनको प्रतिद्वन्द्वी एमालेका सुनील गुप्ता भएको समाचारमा जनाइएको छ ।
कलैयामा त्रिकोणात्मक प्रतिस्पर्धा
प्रस, वीरगंज, ८ असोज/ कलैया उपमहानगरपालिकाको नगर प्रमुखमा त्रिकोणात्मक प्रतिस्पर्धा जारी छ । मतगणना शुरु भएपछि नगर प्रमुखमा सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका प्रमोद गुप्ता अगाडि थिए भने त्यसपछि निरन्तर एमालेका विनोद साहले अगाडि छन् । उनले ७६८९ मत ल्याएका छन् । एमालेलाई नेकाका राजेश यादवले पछ्याउँदैछन् । यादवले ७४५६ मतले पछ्याइरहेका छन् । शुरुमा अगाडि रहेका फोरम नेपालका गुप्ता अहिले तेस्रो नम्बरमा छन् । गुप्ताले ६७४० मत ल्याएका छन् । उपमेयरमा एमालेकी प्रतिमा यादव ७४२२ मतले अगाडि छिन् भने नेपाली काङ्ग्रेसको रहिमा खातुन ७१०५ मतले दोस्रो, फोरम नेपालकी लक्ष्मी पटेल ६०५९ मतले तेस्रो स्थानमा छन् । असोज ३ गतेदेखि शुरु भएको मतगणना अहिले अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कलैया उपमहानगरपालिकामा २७ वडा रहेको र त्यसमध्ये २१ वडाको परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ भने ६ वडाको गणना जारी छ ।
वीरगंजका चिकित्सक तीन दिनदेखि हडतालमा, स्वास्थ्य सेवा प्रभावित
प्रस, परवानीपुर, ८ असोज/ नेपाल चिकित्सक सङ्घले तीन दिन देखि आह्वान गरेको हडतालका कारण स्वास्थय सेवा प्रभावित भएको छ । सङ्घको केन्द्रीय कार्यालय, काठमाडौंले जारी गरेको विज्ञप्तिमार्फत् तीन सूत्रीय माग राख्दै नारायणी अञ्चल शाखा पनि आन्दोलित भएको हो । नारायणी अञ्चल शाखा अध्यक्ष डा. जगदीश अग्रवालले माग पूरा नभएसम्म चिकित्सकहरूको आन्दोलन जारी रहने बताए । सङ्घले गत असोज २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा यदि उपचारको क्रममा कुनै बिरामीको मृत्यु भयो भने त्यसको क्षतिपूर्ति सम्बन्धित चिकित्सकबाट नै भराउने निर्णयले सम्पूर्ण चिकित्सकहरूको मानमर्दन र सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षा ऐनको उपहास गरेको चिकित्सकहरूको ठहर छ । आन्दोलित चिकित्सकहरूको पहिलो बुँदा पास हुन लागेको विधेयक फिर्ता गर्नुपर्ने माग रहेको छ । दोस्रो माग स्वास्थ्य संस्था तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात तथा आक्रमण गर्नेलाई जेल बिदाउट–वेल राखिएको छ । तेस्रो चिकित्सक शिक्षा ऐन पारित हुनुपर्ने र बिरामीमाथि थुप्रिंदै गएको ५ प्रतिशत सेवा शुल्क खारेज गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
लोकतन्त्र र शिक्षा
अनन्तकुमार लाल दास नेपालको सबैभन्दा ठूलो चाड दशैंसँगै लोकतन्त्रको ठूलो उत्सवको पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । प्रदेश नं. २ को आम जनता समग्र परिणामको प्रतीक्षा गरिरहेको छ । लोकतन्त्रप्रति जनताको विश्वास बढेको छ । वास्तविक लोकतन्त्रमा न सामाजिक भेदभावको कुनै ठाउँ हुन्छ, न कुनै प्रकारको आर्थिक असुरक्षाको । तर निर्वाचन र मत परिणामलाई नियाल्दा के प्रस्ट हुन्छ भने अहिले पनि हामी पिछडिएको लोकतन्त्रमा बाँचिरहेका छौं । नेपाली लोकतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्ने समकालीन राजनीतिमा जस्तो नेतृत्वको वर्चस्व बढिरहेको छ त्यसले के प्रश्न उब्जाएको छ भने तीन करोडभन्दा बढी आबादी भएको यस देशमा पञ्चायतकालदेखि हालसम्म संसद्मा जसको हातमा नेतृत्व रहेको छ उनीहरू कुन वर्गका हुन् र सही अर्थमा कसको प्रतिनिधित्व गर्छन् ? देशको बहुसङ्ख्यक जनता गरीबीको रेखामुनि बाँचिरहेको छ । के यो वर्तमान नेतृत्व उनीहरूको भोक, शिक्षा, स्वास्थ्य र उनीहरूका लागि रोजगारप्रति प्रतिबद्ध छ ? नेपाल कृषिप्रधान देश हो तर संसद्मा कतिजना किसान छन् ? आज देशमा जुन प्रकारको चुनावी संस्कृतिको विकास भइरहेको छ त्यसमा गरीबीको रेखामुन
नबाझोस् मतगणना र दशैं
तेस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन कुबेलामा भयो । कारण जे रहेको होस्, खुशीको कुरा यो छ कि निर्वाचन निर्विघ्न सम्पन्न भयो । अहिले मतगणना कार्य हुँदैछ र दशैंले पनि छोप्दै आएको छ । मङ्गलवार ३ गतेदेखि शुरु भएको मतगणना आइतवार बिहानसम्म आधा मात्र सकिएको छ । ८४ हजार मतपत्र गिन्ती गर्नुपर्ने अवस्थामा ४५ हजार मात्र मतगणना भएको छ । आधाभन्दा केही बढी । यसका लागि ५ दिन पूरा खर्च भएको छ । गणितको हिसाबले शुक्रवारसम्म कहीं मतगणना पूरा हुनेछ र मत परिणाम सार्वजनिक हुनेछ । गणित सामान्य स्थितिमा मात्र सही हुन्छ । मतगणनामा कुनै झमेला खडा भयो भने दिन लम्बिन सक्छ, वा निर्वाचन आयोगले मतगणना सम्पन्न भइसकेका ठाउँबाट जनशक्ति थपेर एकैपटक धेरै ठाउँमा मतगणना गराउने हो भने छिटो पनि सम्पन्न हुन सक्छ । पर्सा जिल्लाका सबै नगरपालिका र गाउँपालिकाको निर्वाचन परिणाम प्राप्त भइसकेको अवस्थामा वीरगंजका मतदाताले मात्र प्रतीक्षारत रहनु कष्टकर बुझिन थालेको छ । मत परिणामको मानिसमा जति कौतूहलता छ, त्यति नै दशैं मुखमा आइसकेको छटपटी पनि छ। सामान्यतया दशैं सप्तमीदेखि प्रारम्भ मानिन्छ । किनकि यसै दिनदेखि सरकारी कार्यालयहरू
२०७४ असोज ८ गते आइतवारको प्रतीक दैनिक
वीरगंज महानगरबाहेक ३ नगरपालिका र १० गाउँपालिकाको मतपरिणाम सार्वजनिक
प्रस, वीरगंज, ७ असोज/ पर्सा जिल्लाको वीरगंज महानगरपालिकाबाहेक ३ वटा नगरपालिका तथा १० वडा गाउँपालिकाको मतगणना परिणाम सार्वजनिक भएको छ । निर्वाचन कार्यालयले जनाए अनुसार सम्पन्न नगरपालिकाको मतगणनामा बहुदरामाई नगरपालिकाको प्रमुखमा नेपाली काङ्ग्रेसका नितेन्द्र साह र उपप्रमुखमा नेपाली काङ्ग्रेसकै गायत्री देवी विजयी भएकी छन् । यसैगरी, पोखरिया नगरपालिकाको प्रमुखमा नेपाली जनता दलका दीपनारायण रौनियार र उपप्रमुखमा सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालकी सलमा खातुन विजयी भएका छन् । पर्सागढी नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखमा नेपाली काङ्ग्रेसका लोकनारायण यादव र अर्चना चौधरी विजयी भएका छन् । शनिवार सम्पन्न गाउँपालिकाको मतगणनाको परिणाम अनुसार धोबिनी गाउँपालिकाको अध्यक्ष्Fमा काङ्ग्रेसका सुरेश कुर्मी र उपाध्यक्ष्Fमा फोरम नेपालका पारसनाथ पटेल विजयी भएका छन् । पकहामैनपुर गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष्Fमा फोरम नेपालका विजय चौरसिया र सो पार्टीकी कुसुमी देवी विजयी भएका छन् । उपाध्यक्षमा विजयी कुसुमी देवी मधेस आन्दोलनका शहीद शत्रुघ्न पटेलकी आमा हुन् । त्यस्तै, यसअघि घोषणा भएका कालिक
३ महिलासहित ५७ जनाद्वारा रक्तदान
प्रस, वीरगंज, ७ असोज/ राजदेवी साङ्गीतिक समूह, कलैया, बाराले आयोजना गरेको रक्तदान कार्यक्रममा ३ महिलासहित ५७ जनाले रक्तदान गरेका रक्त सञ्चार केन्द्र वीरगंजका प्रमुख प्रवीण मानन्धरले बताए । समूहका अध्यक्ष नीरज नेपालीको अध्यक्षता र बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजयनारायण मानन्धरको प्रमुख आतिथ्य सम्पन्न रक्तदान कार्यक्रममा मीरा अधिकारी, श्वेता श्रेष्ठ, रानीदेवी नेपाली, सञ्जय चौरसिया, राजकुमार, जयप्रकाश गुप्ता, गोविन्द साह, सञ्जीव यादव, रोहित साह, दीपक सर्राफलगायतले रक्तदान गरेका थिए । कार्यक्रममा रक्त सञ्चार केन्द्र वीरगंजका जीतेन्द्र कुशवाहा, नन्दकिशोर साह, सुनील चौधरी, लोकेन्द्र पटेलले प्राविधिक सहयोग पु¥याएका थिए ।
वीरगंजको आलोकमा पूर्वाधारका बेथिति
ओमप्रकाश खनाल वीरगंज उत्पादन मात्र नभएर आपूर्तिको पनि केन्द्रबिन्दु हो । विविध अवरोध र विरोधाभास भएर पनि यो सीमान्त शहर आयात–निर्यात कारोबारको अद्यावधिक आधार बनिराखेको छ । यो कसैको पहल र प्रयत्नबाट सम्भव भएको भने होइन, वीरगंजको भौगोलिक अवस्थिति नै यस्तो छ, जसले यो क्षेत्रलाई मुख्य उत्पादन र आपूर्तिकर्ताको रूपमा स्थापित गरिदिएको छ । नेपालको मध्यभागमा रहनु र भारत तथा तेस्रो मुलुकसितको व्यापारमा तुलनात्मक कम दूरीमा रहनुका कारण यो मुख्य नाका बन्न सकेकोमा किन्तुपरन्तु आवश्यक पर्दैन । वीरगंज र आसपासका क्षेत्रमा निर्माण भएका उद्योग– व्यापारलक्षित पूर्वाधार कुनै सरकारी प्रयत्न र दीर्घकालीन योजनाका उपज होइनन् । खासमा यो राजधानीलाई आपूर्तिसँग जोड्ने अभीष्टको उत्पादन हो । अहिलेसम्म वीरगंज र आसपासका क्षेत्रमा निर्माण भएका र योजनामा राखिएका औसत योजनाले राजधानीसितको सम्पर्कलाई नै मूल ध्येय बनाएका छन् । यस्ता संरचनाले स्थानीय विकासमा कुनै योगदान पु¥याएकै छैन भन्ने होइन । तर यहाँको सामाजिक जीवनको उत्थानमा देखिएको उदासीनताले आर्थिक विकासका पूर्वाधारभित्र अन्तर्निहित सरकारी अदूरदर्शिता र
राम्रो छिमेकी को ? –एक शोध
गताङ्कको बाँकी ‘असल छिमेकीबाट कस्ता व्यक्तिलाई लाभ पुग्यो ?’ शोधको बेला युद्धको छाया मेटिएको थिएन । अतः बढीजसो यस्ता व्यक्ति लाभान्वित भए, जसलाई युद्धको कारण त्रस्त हुनुपरेको थियो । त्यसमध्ये २२ प्रतिशत सैनिक थिए, १९ प्रतिशत बच्चा । १५ प्रतिशत रोगी थिए, १२ प्रतिशत अन्य व्यक्ति । प्रौढ थिए ७ प्रतिशत, दरिद्र ३ प्रतिशत, वृद्ध २ प्रतिशत र १/१ प्रतिशत विद्यार्थी, अपराधी, दुःखी आमा, दृष्टिविहीन, अपाङ्ग । ‘तपाईंले असल छिमेकी बन्ने प्रेरणा कसरी पाउनुभयो तथा छिमेकीको सेवा–सहायताको भावना तपाईंभित्र कसरी जन्मियो ?’ २९ प्रतिशत व्यक्तिले भने– ‘हाम्रो मातापिताले, हाम्रो परिवारले हामीलाई यस्तो प्रेरणा दिएका थिए ।’ २९ प्रतिशतले भने– ‘हामीलाई लाग्यो कि मानव प्रकृतिमा स्नेह र सहकारिता छ तथा मानव विकासको लागि छिमेकीको सेवा अनिवार्य आवश्यकता हो ।’ २१ प्रतिशतले भने– ‘धर्मले हामीलाई यस्तो प्रेरणा दियो ।’ ११ प्रतिशतले भन्यो– ‘जीवनको निजी अनुभवले हामीलाई छिमेकीको सेवाको लागि प्रेरित ग¥यो ।’ ८ प्रतिशतले भन्यो– ‘स्वाध्याय एवं शिक्ष्Fाबाट हामीले यस्तो प्रेरणा पायौं ।’ १ प्रतिशतभन्दा बढी व्यक्तिले
वडाको घोषणाक्रम जारी, मेयरमा नेका पहिलो,फोरम दोस्रो
प्रस, वीरगंज, ६ असोज/ वीरगंज महानगरपालिकाको वडाहरूको मतपरिणाम आउनेक्रम शुरू भएको छ । मतगणना शुरू भएको तेस्रो दिनको रातिदेखि वडाहरूको परिणाम आउन शुरू भएको हो । सबैभन्दा पहिले परिणाम घोषणा भएको वडा नं. ३० मा अहिले विवाद देखिएको छ । मुख्य निर्वाचन कार्यालयले शुरूमा नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेदवार ४ मतले विजयी भएको जनाएको थियो । पछि पुनः गणना गर्दा एमालेका उम्मेदवार १६ मतले विजयी भएको बताएपछि विवाद भएको हो । वडा नं. ३० मा एमालेका अमानत मियाँलाई विजयी घोषणा गरिएको छ । यता गएरातिदेखि अन्य वडाहरूको घोषणा पनि शुरू भएको छ । वडा नं. १ बाट नेकाका मनोजकुमार गुप्ता विजयी भएका छन् । यसैगरी, वडा नं. २ मा सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका शेख अब्बास विजयी भएका छन् भने वडा नं. ३ मा राजपाका बैजुप्रसाद स्वर्णकार विजयी भएका छन् । वडा नं. ४ मा नेकाका जगत साह कानू विजयी भएका छन् । वडा नं. ५ को वडाध्यक्षमा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका प्रदीपकुमार चौरसिया विजयी भएका छन् । महानगरको मेयरमा भने नेकाले अग्रता लिंदैछ । पहिलो र दोस्रो दिन राजपा अगाडि रहेकोमा अहिले आएर राजपा तेस्रो स्थानमा र फोरम नेपा
२०७४ असोज ०७ गते शनिवार
२०७४ असोज ०७ गते शनिवारको प्रतीक दैनिक पढ्नुहोस् ।
पर्साको ५ गाउँपालिकाको परिणाम घोषित
प्रस, वीरगंज, ६ असोज/ पर्सा जिल्लाको १ महानगर, ३ नगर र १० गाउँपालिकामध्ये १ नगरपालिका र ५ गाउँपालिकाको मतगणना सम्पन्न भइसकेको छ भने बाँकीमा मतगणना जारी छ । तीन नगरपालिकामध्ये पर्सागढी नपाको मतपरिणाम सार्वजनिक भएको छ । पोखरिया र बहुदरामाई नपामा मतगणना जारी छ । जारी मतगणनामा पोखरियामा नेपाली जनता दलका दीपनारायण रौनियार मेयरमा र फोरम नेपालकी सलमा खातुन उपमेयरमा अग्रस्थानमा छन् । पोखरिया नपाको ७ वडाको मतपरिणाम घोषणा भएको छ । घोषित मतपरिणाम अनुसार वडा नं. १, ६, ७ मा क्रमशः फोरम नेपालका बंका राउत कुर्मी, सियानन्द चौहान र नन्दलाल साह विजयी भएका छन् । यसैगरी, वडा नं. २ र ५ मा नेपाली जनता दलका सुरेन्द्र यादव र उमाशङ्कर साह कानू विजयी भएका छन् । वडा नं. ३ र ४ मा नेकाका अजय कलवार र लक्ष्मण साह कानू विजयी भएका छन् । बहुदरमाई नपामा नेकाका नितेन्द्र साह अगाडि छन् । घोषित गाउँपालिकामा जगरनाथपुरबाट माओवादी केन्द्रका जालिम मियाँ विजयी भएका छन् भने छिपहरमाई गापाबाट माओवादीकै मनोज गुप्ता अध्यक्षमा र उपाध्यक्षमा मदिना खातुन विजयी भएका छन् । विन्ध्यवासिनी गापाको अध्यक्ष्Fमा फोरम नेपाल
वीरगंजको स्वास्थ्य सेवा पनि ठप्प
प्रस, वीरगंज, ६ असोज/ नेपाल चिकित्सक सङ्घको आह्वानमा शुक्रवारदेखि नेपाल चिकित्सक सङ्घ नारायणी अञ्चल वीरगंज शाखा पनि आन्दोलनमा उत्रिएको छ । ७२ घण्टे अल्टिमेटम दिएको सङ्घले माग सुनुवाइ नभएपछि आजदेखि आन्दोलनमा उत्रिएको हो । सङ्घको आह्वानमा देशभरिका स्वास्थ्य सेवा ठप्प पारिएको छ । यसैगरी, वीरगंजको स्वास्थ्य सेवा पनि आज बिहानदेखि ठप्प छ । नाउक्षे अस्पतालमा आकस्मिक सेवा मात्र सञ्चालनमा रहेको मेसु डा. चित्तरञ्जन साहले बताए । सङ्घको आह्वानमा अस्पताल, नर्सिङ होम, क्लिनिक आदि सम्पूर्ण सेवा ठप्प गरी चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । चिकित्सकहरूको आन्दोलनको कारण बिरामीहरू मर्कामा परेका छन् । सरकारले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्ष्Fासम्बन्धी ऐन २०६६ र नियमावली २०६९ मा व्यवस्था भए अनुसार उपचारको क्रममा लापर्बाही भई बिरामीको मृत्यु भए वैज्ञानिक अनुसन्धानबाट लापर्बाही ठहरिए समन्वय समितिले क्षतिपूर्ति भराइदिने स्पष्ट व्यवस्था भएकोमा सोविपरीत मन्त्रिपरिषद्को असोज २ गते बसेको बैठकले चिकित्सकहरूको मानमर्दन गर्ने र पेशेवर सामाजिक अपराधीहरूको मनोबल बढाउने गरी चिकित्सकहरूबाट
डा. रमेश मिश्र आयुर्वेद एउटा चिकित्सा विज्ञान हो । रोग परीक्ष्Fण र औषधि व्यवस्थापन सबै वैज्ञानिक पद्धतिमा आधारित हुन्छ । कुन रोग लाग्ने कारण के हो ? कहिलेदेखि लागेको छ ? यसको लक्षण र औषधि व्यवस्था सबैको एउटा निश्चित मापदण्ड हुन्छ । आयुर्वेद उपचारमा एउटै रोगको औषधि व्यवस्थापन रोगीको प्रकृति अनुसार फरकफरक हुन्छ । अतः योगी, साधु, फकिर र टेलिभिजनको विज्ञापनमा भर परी औषधि कहिल्यै पनि सेवन गर्नुहुँदैन । रोग लागे आयुर्वेद खानुपरेमा आयुर्वेद चिकित्सक, कविराज, वैद्यको सल्लाहनुसार सेवन गर्नुपर्दछ । आयुर्वेद अनुसार वात, पित, कफ, यी तीन शारीरिक दोषहरू हुन् । यसैमा हाम्रो शरीर स्वस्थ रहनु वा नरहनु आधारित हुन्छ । यसमध्ये कुनै एक, दुई वा तीनै दोषहरूमा जब विषमता हुन्छ, तब रोगको उत्पत्ति हुन्छ र दोष वैषम्यलाई नै रोग वा विकार भनिन्छ । दोष वैषम्य हुनेबित्तिकै रोग उत्पन्न हुँदैन, यसको क्रमिक विकासको प्रक्रियाबाट रोग उत्पन्न हुन्छ । विषम दोष जुन क्रमबाट रोग उत्पन्न गर्दछ, त्यस क्रममा ६ वटा अवस्था हुन्छन्, जसलाई आयुर्वेदको भाषामा क्रियाकाल भनिन्छ । क्रियाको अर्थ हो चिकित्सा र कालको अर्थ हो अवसर अर
उमाशङ्कर द्विवेदी अन्त्यमा राजा धृतराष्ट्रले भने–“दुर्योधन, महात्मा कृष्णजीले जुन कुरा भनेका थिए, त्यो जम्मै कल्याणकारी हुने खालको छ । तिमी त्यसमाथि ध्यान देऊ र त्यसै अनुसार अनुसरण गर । हेर, पुण्यकर्मा श्रीकृष्णको सहायताले हामीले जम्मै राजाहरूसित आप्mनो अभीष्ट प्राप्त गर्न सक्दछौं । तिमी यिनीसित राजा युधिष्ठिरको सामु जाऊ र ती जम्मै काम गर, जसले गर्दा जम्मै भरतवंशीहरूको मङ्गल हुन सकोस् । मेरो विचारमा त यो सन्धि गर्ने बेला हो, तिमीले यसलाई खेर नफाल । हेर, श्रीकृष्ण सन्धिको लागि प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ र तिम्रो हितको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ । यदि तिमीले यो कुरा मानेनौं भने तिम्रो पतन कुनै पनि प्रकारले रोकिनेछैन ।” यस्तो अप्रिय वचन सुनेर राजा दुर्योधनले श्रीकृष्णसित भने– “केशव, तपाईंले कुनै पनि कुरा राम्ररी सोचविचार गरेर मात्र बोल्नुपर्ने हुन्छ । तपाईं त पाण्डवहरूको प्रेमको बाङ्गोटिङ्गो कुरा गरेर विशेषरूपले मलाई नै दोषी ठह¥याउँदै हुनुहुन्छ । के तपाईंले मेरा बला–बलबारे विचार गरेर नै सर्वदा मेरो निन्दा गर्ने गर्नुहुन्छ ? मैले के देख्दैछु भने तपाईं, विदुरजी, पिताजी, आचार्यजी, र पिताम
– समीर पाख्रिन गताङ्ककको बाँकी महिला २ ः यति छोटो समयमा पनि कतै बिरामी जाँचिन्छ त डाक्टर सॉप ? डा. पाण्डे ः ल किन जाँचिंदैन । टिकट काटेर पालो पर्खनु मात्रै त टाइम लाग्ने हो नि । बिरामी ः एई पतरी, तँ डाक्टरसित गफ गर्न आएकी कि मेरो उपचार गराउन भन त ? (चुल्ठोमा समातेर फनफनी घुमाउँछ) महिला २ ः आइँया १ जड्याँहाले त भुतालेर मा¥यो है । पर्खन फीस मिलाउनुपरेन ? बिरामी ः के बस चढेको हो र किच्किच् गर्ने ? जति भन्छ दिइहाल् । यहाँ मान्छे दाँत दुखेर मर्न आटिसक्यो । महिला २ ः डाक्टर सॉप, मेरो बूढोको दाँत झारिदिइ हाल्नोस् त, साहै्र दुःखेको जस्तो छ । डा. पाण्डे ः पहिला फीस जम्मा गर्नुप¥यो नि त । महिला २ ः अलिक मिलाएर भन्नोस् न त । डा. पाण्डे ः अरूलाई चार सय लिने गरेको छु । तपाईं तीन सय दिनोस् । महिला २ ः त्यो पनि धेरै भयो । (बिरामीले दुखाइ सहन नसकी अघि डाक्टरले पढ्दै गरेको अखबार धुजा–धुजा पारेर च्यात्छ ।) डा. पाण्डे ः त्यसो भए अढाई सय दिनोस् । हेर त दुखाइ सहन नसकेर, पढ्नै नपाई मेरो अखबार धुजाधुजा पारेर च्यातिदिएछ । महिला २ ः डेढ सय जति गरेको भए ठीक्क हुने
नेपालको मिथिलाञ्चल क्षेत्रका नदीहरू ः एक चर्चा
बासुदेवलाल दास, पीएच. डी. सहप्राध्यापक, इतिहास विभाग ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पस, वीरगंज गताङ्कको बाँकी यस स्थानमा यस नदीलाई क्षीरोदकी अथवा क्षीरवती भनिन्छ, जुन दूधवती वा दूधमती शब्दका पर्यायवाची शब्द हुन् । स्थानीय बोलीमा यसलाई खिरोई नदी भनिन्छ । एकमीघाट भन्ने स्थानमा खिरोई नदीसित सङ्गम गरेर व्याघ्रवती (छोटीबागमती) नदी दक्षिणतिर प्रवाहित हुँदै अगाडि आमाडीह क्षेत्रमा बागमतीको एउटा अर्को धारासित सङ्गम गर्दछ । कमलाः कमला नदीको उद्गम नेपालको महाभारत पर्वत शृङ्खलामा रहेको छ । यो नदी त्रिस्रोतसा रहेको छ, अर्थात् यसका तीनवटा स्रोतहरू छन् । कमलाका पश्चिमी र मध्य स्रोतहरू सिन्धुली जिल्लाको क्षेत्रबाट प्रवाहित भई धनुषा जिल्लाको क्षेत्रमा पुग्दछन् । यसको पूर्वी स्रोत भने केही लामो रहेको छ तथा यसैलाई कमलाको मूल स्रोत मानिएको पाइन्छ । यस पूर्वी स्रोतको उद्गम सगरमाथा अञ्चलको उदयपुर जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रमा रहेको छ । यो उदयपुरगढीदेखि नैऋत्यकोणवर्ती प्रवाहित हुँदै धनुषा जिल्लाको भूभागमा आउँछ, जहाँबाट तीनवटै स्रोतहरू मिसिएर दक्षिणतिर प्रवाहित हुन्छन् । कमला नदी धनुषा र सिरहा जिल्लाहरूक